कार्टुन क्रिउको नयाँ भिडियो, सरोज छोडी पलतिर आश्मा ! « Ramailo छ
कार्टुन क्रिउको नयाँ भिडियो, सरोज छोडी पलतिर आश्मा !
चर्चित डान्स ग्रुप कार्टुन क्रिउको नयाँ भिडियो आएको छ । मोडल तथा नायक पल शाहको समेत केमियो रहेको ‘जता जता पिरतीको बाटो’ बोलको गीतको भिडियोलाई कार्टुन क्रिउका सरोज अधिकारीले निर्देशन गरेका छन् । कोरियोग्राफी सरोज, आश्मा र सुविनले गरेका छन् । भिडियो हेर्नुस् :
बसन्त सापकोटाको संगीत रहेको गीतमा सरोज वली र दिनेश थपलियाको शब्द छ । भुपेन्द्र अधिकारीको सम्पादन रहेको भिडियोमा संजय लामाको छायाँकन छ ।